guyyaan sabaaf sablammoota ummatootaa 12ffaan sagantaallee gara garaatiin kabajame - Seensa - Information Network Security Agency
E-mail nuuf godha contact@insa.gov.et
Nu qunnamaa +251-113-71-71-14
Raaga (mul’ata) – Ergama - Gatiiwwan
guyyaan sabaaf sablammoota ummatootaa 12ffaan sagantaallee gara garaatiin kabajame
ayyaanni guyyaa sabaaf sablamoota ummatootaa 12ffaa ……."heedumini saba keenyaa heera keenyaan ifuu haaroomsa keenyaaf" Jedhuun guyyaa jimaata sadaasa 29, 2010 sagantaalee garagaraatiin eejensii nageenya saaphana infoormeeshiniiti kabajameera.
Guyyaa kanatti yaada ka'uumsaa "maalummaa fi barbaachisummaa sirna feedeeraalaa, injiffannoowwan fidaa jiruu fi gufuuwwan isa qunnamaa jiran" jedhuun mariin paanaalii adeemsiifamee yaadooleen baay'een fi babal'oon adeemaniiru. Sirni feedeeraalaa biyyaatti teenyaa sirna heedumina sabaa gageessuudhaan bu'aa ifaa ta'ee galmeesaa kan argamuu ta'uun isaas mariicha irratti ibsameera. Heddumini sabaa sirna ummatootni biyya tokko keessatti afaan isaanii, eenyummaa isaanii, seenaa isaanii fi gatiiwwan biro kanneen fakkaatan kabajanii tokkummaa isaanii irratti hundeeffatan ta'uun isaas mariicha irratti ibsameera. Biyyatti keessatti gama sabbummaa deemookraatawaa ijaaruutiin yaaliin godhamuus guffuuwwan akka mudataniis hirmaatootni kaasaniiru. Guffuuwwan kanneen keessaa hiyyuumaa, dubati-hafuumaa, kiraa sassaabdummaa fi sabbummaa makaraarsaa dhihoo tana mul'ataa jiru akkasumas gama sirna feederaalaa heddumina sabaa gadi fageenyaan dhaabuutiin hanqinoonni jiraachuun isaanii ni ibsamuu jedhaniiru.
Daayreektarii ijjoo eejensii nageenya saaphana infoormeeshinii mejer jeneeraal Taklabirhaan Woldaargaay (D/r) yaada mariicha yeroo xumuran kennan irratti nuti Itiyiphiyaanoonni jechuun haada seenaa baay'eetiin kan waliitti hidhamnee yemmuu taanu kana diiguuf qaamni yaaluu yoo jiraatte ufiituummaa dha. gama biraatiin tasgabii dhabuu darbee darbee mul'atan burqaa isaa gosuuf furmaatni barachuu fi hojjachuuf qophaa'aa ta'uu qabna kunis maxxantuumaa fi eegdummaa keessa bahuuf gargaara jedhaniiru.
saaybarii nageenyi isaa eegame nagaya, misoomaa fi deemookraasiif
Bara 2017ti human saayberii biyyooleessaa dandeetii sadarkaa addunyaatti dorgomuu qabu fi haroomsa biyyatti keessati shoora murteessaa taphatu dhugoomsu.
Humna Saayberii Biyyooleessaa fedhiiwwan biyyatti eegsiisu danda'u ijaaruu
Oddeeffannoo teekniikaa faayyidaawwan biyyooleessaa eegsisuu danda'u oomishuudhaan murtii fi hujjii mootummaa deeggaruu
Cee'umsii haayteek fi nageenya biyyooleessaa akka mirkanaa'u dandeettiiwwan data fi koompiwtiingii misoomsuu
Yeroo hunda barachuu fi guddachuu
Garaagarummaa uumuu (gatii dabaluummaa)
saaybarii nageenyi isaa eegame nagaya, misoomaa fi deemookraasiif.
Mulata� Ergama - Gatiiwwan
qo'annoo fi qorannoo
taalantii saaybar Itiyoophiyaa
gaafilee irra deddebiidhaan gaafataman
aradaa marii nageenya infoormeeshinii
yuniyeenii teeleekoomunikeeshinii addunyaa
Seensa/Tajaajila/taalantii saaybar Itiyoophiyaa/Teessoo
© 2018 Ejensii nageenya saphana infoormeeshinii.Mirgi isaa seeraan eegamaa dha.